Amboaran-kira sy Orimbato Ambatonakanga : hanjaka ny fampiaraham-peo | NewsMada
Amboaran-kira sy Orimbato Ambatonakanga : hanjaka ny fampiaraham-peo
Fifanakalozana sy fifampizarana traikefa. Hetsika efa fanaon’ny Amboaran-kira Vinany Tempoly Malala ny fiaraha-mihira amina antoko mpihira hafa. Amin’ity taona ity, ny Orimbato Ambatonakanga no nasain-dry zareo.
Hetsika iarahana eo amin’ny samy antoko mpihira. Hanatanteraka antsan-kira lehibe ny Amboaran-kira Vinany Tempoly Malala sy ny antoko mpihira Orimbato Ambatonakanga ny alahady 10 jolay izao manomboka amin’ny 3 ora hariva ao amin’ny FJKM Vinany. Antsan-kira fiderana hanjakan’ny fampiaraham-peo eo amin’ireto antoko mpihira samy sangany ireto. Mahatratra 15 ny hira hantsaina amin’io ka ny 7 amin’ireo, hiarahana avokoa, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Samy hihira hira 4 kosa ny antoko mpihira tsirairay.
Fantatra fa efa nisy fifanakalozana teo amin’ny antoko mpihira Amboaran-kira Vinany Tempoly Malala sy ny antoko mpihira Orimbato Ambatonakanga, tany amin’ny volana jona. « Ry zareo no tany aminay tamin’io fotoana io. Ankehitriny kosa, izahay no mankany amin’ny Amboaran-kira Vinany Tempoly Malala ho fanohizana izay fifanakalozana izay », hoy hatrany ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Orimbato Ambatonakanga. Voaresaka sy voadinika amin’ireny fifanakalozana ireny avokoa na ny fomba fihira, fiakarana an-tsehatra, fandrindrana, sns.
Tafiditra ao anatin’ny « Alahadin’ny STK » ity antsan-kira ity. Hanampiana ny asa fampandrosoana io sampana velona eo anivon’ny fiangonana Vinany Tempoly Malala io izay vola foin’ny olona ho tonga eny an-toerana hanatrika ny seho.